I-AirTags yeHack, inika iMacBook Air nokunye okuninzi. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
I-AirTags yeHack, inika iMacBook Air kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Kulindeleke ukuba kwiveki ezayo kubekho iindaba malunga nee-AirPods ezintathu zika-Apple kodwa kungekuphela ngee-AirPods, kukwakho nentetho yokuba iApple Music yongeza umgangatho wesandi seHi-Fi. Kodwa ngoku siza kubeka ikamva ecaleni ukuze sigxile kumanqaku exesha elidlulileyo. Kwaye yile veki sinayo iindaba ezibalulekileyo kwihlabathi leApple kwaye abanye babo siza kubakhumbula namhlanje ngeCawa kunye nani nonke.
Eyokuqala kwezi ndaba imalunga «ukukhwabanisa» kwee-AirTags. Le yenye yeendaba ezinokuchukumisa abasebenzisi kodwa ukuba ngokomgaqo asifanelanga ukuba nexhala, kwaye zimalunga yinto "ebuthathaka" emninzi engenakothusa kwaphela.
IiMacBooks ezintsha zilindele ukukhutshwa kungekudala.
Kule veki bekukho ne unikele ngento enokuba yiMacBook Air entsha yalo nyaka. Ukulunga kwe UJon Prosser, ebephethe ukubonisa uyilo olunokwenzeka kwezi Apple MacBook Air kwaye kubonakala ngathi bayayithanda kakhulu nangona kuyinyani ukuba asitsho nangaliphi na ixesha ukuba uyilo lokugqibela.
Ngaba ucinga ukuba iApple ingavula ikhonsoli yomdlalo? Ewe, kubonakala ngathi kukho amarhe okuba Inkampani yaseCupertino ingavuma ukumilisela ikhonsoli okanye ubuncinci isebenze kuyo. Kule veki sizibonile iindaba.
Okokugqibela sifuna ukwabelana nawe ngazo zonke iindaba malunga amanqaku okuqala eGeekbench ye-iMac ene-intshi ezingama-24 eneprosesa yeM1. Njengompangi kwaye ukuba kunjalo khange uzifunde iindaba ngaphambili Siza kukuxelela ukuba ngamanqaku aphezulu aphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-AirTags yeHack, inika iMacBook Air kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Iimaski zisanyanzelekile kwiiVenkile zeApple eMelika
Izixhobo ze-IMac Pro eziNgwevu eziGreyini ziyathengiswa ngelixa izinto zihlala zikhona